Armenian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(534 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Kubhejera pamhepo muArmenia kunotenderwa uye kushingairira kubudirira, sezvo mhando dzese dzekubheja paInternet zviri pamutemo zviri pamutemo pasi pemutemo wekubhejera online kweArmenia. Munyika kune vose vari vepaIndaneti vashandisi vanoita basa pasi peisense yehurumende, uye kune dzimwe nyika.
Sezvo vagari vakawanda veArmenia vachitaura chiRussia, vanogona kukwanisa kunakidzwa nekubhejera pamhenderekedzo yepamhenderekedzo yekutamba panzvimbo dzekubhejera dzichipa mabasa avo muchiRussia. Zvisinei, nzvimbo dzekune dzimwe nyika mune dzimwe mimwe mitauro dzinozivikanwa zvakare pakati peArmenian gamers. famba kubhejera iyo inozivikanwa zvikuru muArmenia, sezvo uwandu hwenhumbi dzemichina dzakasiyana-siyana dzesefono dziri kuramba dzichikura. Tinocherechedza mubhuku redu rekutsvaga rekubhejera iro munharaunda yenyika inonyanya kunakidza pakugadzirwa kwepasi nekubhejera.
Rudzi rwe Top 10 Armenian Online Casino Sites
Nhoroondo yebhizimusi yehurumende yeArmenia inodzokera kumashure e20th yezana remakore. Muna 1936 Armenia yakava Soviet Republic. Imwe chete mitemo yepamutemo yekubhejera munyika panguva iyoyo yakanga iri kutengesa kumarudzi uye State Lottery. Kutaura zvazviri, Armenia inopinda mubhizimisi yekunyambisa mushure mekuparadzwa kweSoviet Union. Yekutanga hove yemari munyika yacho yakazarurwa muna 1990, uye kambani yekutanga yakabuda mu1991.
Zvizhinji zvekubhejera zvivako zvinoshanda muArmenia nhasi, kusanganisira mabhishopu e-bingo, makasinos, mabhuku mabhuku, nezvimwewo. Zvese dzinoshanda maererano nemirairidzi yakabudiswa neHurumende yeMari yeRepublic of Armenia. Rimwe remakambani anotungamirira ekubhejera ndiro Vivaro Betting, yakatangwa mu2008. Pakati pevamwe vatengesi vemakethe ndeve Totto Gaming, Goodwin-Bet uye Yntanekan Loto. Pasinei nekudzivisa kwakasimba kwekubhejera vanoshanda, mu 2014 Paramende yeArmenia yakapa mutemo wakabvumirana kuti makasinasi ose munyika anofanira kunge ari munzvimbo dzakashanyira, saJermuk, Tsakhkadzor, Sevan, nezvimwewo.
Armenia Online Casinos uye Kubhejera
Armenia inyika yepakutanga uye yekare ine ruvara rusingakanganwiki uye hunonakidza hunhu. Inobatanidza maitiro akangwarira kumidzi yezvakaitika uye hunyanzvi nehunyanzvi hutsva. Ehezve, kuzorora muArmenia, zvakakosha kuravira yakanakisa cognac pasi uye nekupedza nguva mune chic makasino. CasinoToplists vakasarudza kuona kuti zvinhu zvakadii chaizvo nekubhejera muazvino Armenia online uye mumasaini epasi.
Casino in Armenia:
Casinos iri paIndaneti inobvumirwa zviri pamutemo kubva kune vashandi vanobvumirwa muArmenia;
Vatorwa vekunze vanoshanda vasina rezinesi panguva ino havabvumidzwe. Unogona kutamba;
Panguva ino, mutemo wekutsvaga kushandiswa kwevashandi vekune dzimwe nyika uri kukurukurwa;
Kana iwe uri wekutanga, iwe une mirairo pfupi pamusoro pokuti ungatanga sei kutamba paIndaneti;
Nhoroondo uye nzvimbo yeArmenia;
Makasino epasirese ane mukurumbira: "Senator", "Shangri La";
Chokwadi chinofadza pamusoro peArmenia neArmenia;
Armenia inyika yepakutanga uye yekare ine ruvara rusingakanganwiki uye hunonakidza hunhu. Inobatanidza maitiro akangwarira kumidzi yezvakaitika uye hunyanzvi nehunyanzvi hutsva. Ehezve, kuzorora muArmenia, zvakakosha kuravira yakanakisa cognac pasi uye nekupedza nguva mune chic makasino. CasinoToplists vakasarudza kuona kuti zvinhu zvakadii chaizvo nekubhejera muArmenia yemazuva ano, zvese muvhu nemumakasino epamhepo.
Mitemo yeArmenia pakubhejera - nhoroondo kumashure
1921 - 1928 Armenia chikamu cheZFSFR uyezve iyo USSR. Kubhejera bhizinesi munyika kunotenderwa.Kubvira 1928, kurambidzwa kwese ndima yeUSSR.
1936 Armenia muUSSR senyika yemubatanidzwa. Nhandare yemitambo muYerevan uye rotari zvinobvumidzwa.
1991 Mutemo weRisense: Kugadziriswa kweDare reMakurukota eRepublic of Armenia No. 161. Kuvhurwa kwe1st kasino muYerevan. Marezinesi anoburitswa nebazi rezvemari.
1992 Mutemo pamusoro pemutero wemari -ZUMUMX% yemari yekaseino inopa hurumende.
1998 Mutemo "Pamabhadharo Akagadziriswa" - kuronga kubhejera munyika kunova nyore uye kunobatsira.
2000 Mutungamiri Robert Kocharian vakasaina Mutemo Nha. 102 "Pamitambo Inokunda uye Dzimba Dzemitambo" - indasitiri yekubhejera iri kusimukira nekuwedzera. Rezinesi rekuvhurwa kweimba yekutamba kana imba yekutamba. Unogona kutamba kubva pamakore makumi maviri nerimwe.
2001 Mutemo "Pakupa marezinesi" - kuwana rezinesi kunoenderana nechirongwa chakaomarara, kubhejera kwakadzikira.
2004 Mutemo "Pamitambo ine kuhwina uye kubheja dzimba." Kudzoka kwakasarudzika kwemuchina we slot ndeye 86% .Mudhara wekasino kuguta guru reYerevan ingangoita makumi mashanu emakiromita.
2016 - 2017 Kugadziriswa kumutemo pamabasa. Kuwedzera kwemutengo werezinesi revabhuki vepamhepo kashanu (yaive $ 5, yaive madhora miriyoni imwe). Mutevedzeri. Gurukota rezveMari reArmenia Pavel Safaryan vakapa mutemo wekunyora marezinesi zviitiko zvekune dzimwe nyika vanobhejera online vanobhejera vanoshanda. Panguva ino mutemo uri kuongororwa.
Kana iwe ukatamba muInternet kasino muArmenia, iyo ine rezinesi repamutemo renyika ino - chiitiko chako chiri pamutemo chose.
Unogona kutamba pamasaiti evashandisi vekunze, nekuti izvi hazvirambidzwe parizvino uye hazvisi kunyatsoteedzerwa. Naizvozvo, iwe unogona kusarudza chero kasino ine rezinesi repasi rese.
Kana mutemo wekupa mvumo kune vamwe vatengesi kunze kwenyika ichiri kugamuchirwa, zvingangodaro kuwanika kumakosheni emarudzi ose pasina kambani yakabvumirana ichavharwa.
Izvozvo zvinoguma kukurukurirana pamusoro pemvumo yemakadhi ekunze zvisati zvanyatsojeka, asi apo chero muArmenian anogona kunakidzwa kutamba mumakambani avo anodikanwa mumakambani epaIndaneti uye asingatyi kuti kusviba kuchavharwa uye haazokwanisi kuwana zvakakunda.
Ungatanga sei kutamba casino online muArmenia?
Sarudza kinoti . Pfungwa huru ndeyekuvimbika, rezinesi uye ongororo dzakanaka. Tinokurudzira kasino, iyo yakapasa bvunzo - kuti uite izvi, teerera kukoramu iri kurudyi.
Tinonyatsodzidza casino . Kana iwe ukafunga kutamba nemari, unofanira kutanga wawana nezvekodzero dzako nemitemo. Ruzivo rwese ruri munzvimbo dzepamhepo kasino munzvimbo inowanikwa veruzhinji. Tarisa zvakanyanya kune anotevera mapoinzi:
Kuwanika kwechireisheni, kero nevatauri vekasino (foni, kukurukura);
Ongororo dzevatambi pane network (inofanirwa kuve yakanaka uye yakaipa, zvikasadaro ingangove PR, kana iyo inonzi "nhema" PR;
Mitemo yemabhonasi uye wager. Chii chinonzi wager, iwe unogona kuwana pano.
Mubvunzo wemari . Imwe kasino yekune dzimwe nyika inopa akati wandei sarudzo dzekupinda nekubvisa mari Tsanangura, pane pakati pavo izvo zvingave zvakakunakira iwe. Teerera kune iyo mari iyo mutambo ungatambe. Uye zvakare kutarisa kune zvirevo nemamiriro ekudzoserwa kwekukunda (mamwe makasino pamahwini makuru anotamisa mari muzvikamu).
Zvaunoda iwe pachako :
Casino yakagadzirwa uye inofanirwa kufamba;
Kuvapo kwemitambo inofadza;
Ndinofanira kutora software here uye ndeapi inyanzvi yemhando yekombiyuta?
Zvinokwanisika here kutamba pasina mahwanda mu test mode?
Kuvimbika system kumutengi - mabhonasi, kudzorera uye zvichingodaro.
Isu tinokurudzira kutamba kwekutanga mune bvunzo modhi uye nekunyatsoverenga mitemo yemutambo. Izvi zvinonyanya kuitika kumakadhi emitambo (baccarara, blackjack, nezvimwewo).
Tinokuyeuchidza kuti kumatunhu marefu kasino inogara iri mukukunda, asi iwe unogara uine mukana wekushandisa nguva inonakidza uye, pamwe, uchave nerombo rakanaka. Kuti uve nani kudzora yako bankroll uye uwedzere kunakidzwa kwemutambo, verenga chikamu chedu pane masystem uye nzira dzemitambo.
Makamba akakurumbira muArmenia
MuArmenia, kune akasarudzika makasino anopa vashanyi nemamiriro ese emutambo wakasununguka uye kunyangwe zvimwe zvakawanda. Zvichangoitika shanduko mumutemo hazvina kuchinja mamiriro aya.
Iyo yakanakisisa yekubhejera dzimba dzinoshanda kunze kweJerevan, iri pedyo nemugwagwa unotungamirira kune imwe nyika yendege ye Zvartnots.
Kasino "Seneta" inzvimbo yekuvaraidza ine kasino, yekudyira, kirabhu uye bara yekutandarira. Chirongwa chepakutanga chekuratidzira chakarongerwa vashanyi. Mugovera wega wega kune misangano. Mu "Senator" iwe unogona kutamba roulette, blackjack, akati wandei marudzi e poker uye slot michina.
Shangri La Casino ingori 2 km kubva kumaguta eguta miganhu. Iyo institution inochengeta bhaa revanoremekedzwa kwazvo, ichipa sevhisi padanho repasi rose zviyero: akawanda ematafura emitambo, horo dzeVIP, mazana ezvinzvimbo zvemazuva ano, mabhawa matatu, resitorendi ine chikafu cheArmenian uye kondinendi. Zvakajairika zviitiko uye majee zvinofanirwa kuitirwa.
Nekuwedzera, masangano ari kushandura zvese kunetseka kwevatambi. Kwete nguva refu yapfuura yakatanga kuoneka junket marwendo. Vashanyi vecasino vanopihwa kune imwe huwandu hwechipo kwete chete kuchinjisa, pekugara uye imwe nhamba yemachipisi, asi zvakare yakapfuma chirongwa chekushanya.
Nzvimbo yeArmenia uye nhepfenyuro shomanana yemamiriro ezvinhu
IRepublic of Armenia inharaunda duku chero ipi zvayo, iyo ndima inenge ye30 chikuru chemakiromita, uye huwandu huri zvishoma kudarika 3 mamiriyoni. Asi zvakapfuma sei nhoroondo yekona iyi yenyika!
Armenia iri muEastern East, muTranscaucasia. Vavakidzani vepedyo venyika ndiGeorgia, Azerbaijan, Turkey, Iran, Nagorno-Karabakh. Guta guru iYerevan, mutauro wehurumende ndiArmenian, asi anenge munhu wese anonyatsotaura chiRussia.
Nzvimbo yeArmenia yakabudirira zvisingaite, nzira dzekutanga dzekugara dzakadzokera kunguva yemamirioni 1.9 emakore apfuura. Great Armenia yaivepo pamepu yeHerodotus. Kwemazana emakore mazhinji, iyo ndima yaive chikamu chenzvimbo dzakasiyana siyana nehumambo, asi miganho yazvino nyika yakawana chete muzana ramakumi maviri. Muna 1991 Armenia yakava nyika yakazvimirira - republic republic.
Armenia pamepu yeAsia
Zvitsva zve Yerevan
Matenadaran . Kero: 53 Mashtots Avenue, Yerevan 0009, Armenia.
Park yevanoda . Kero: 21 Marshal Baghramyan Ave, Yerevan 0019, Armenia.
The Mosque Blue . Kero: 12 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan 0015, Armenia.
National History Museum of Armenia . Kero: 4 Republic Square, Yerevan, Armenia.
Victory Park . Kero: Azatutyan Ave, Yerevan, Armenia.
Chokwadi chinofadza pamusoro peArmenia neArmenia
Armenia ndiyo nyika yekutanga munyika yose kugamuchira chiKristu sechitendero chehurumende.
Mutauro wechiArmenian ndeweboka rakakosha remitauro - Paleobalkan. Mutauro wega mupenyu, wakabatana chiGiriki.
Mavara echiArmenian akaonekwa pamberi pearufabheti yechiCyrillic. Muna 406 yakasikwa naMesrop Mashtots, uye inoonekwa seimwe yeakanyanya kunaka pasirese (pamwe neKorea neGeorgia).
Gomo reArarat chiratidzo cheArmenia, asi kubvira 1921 iri munzvimbo yeTurkey.
Maapuro eArmenia inowanzozivikanwa maabricric muEurope.
Armenia ndiyo nzvimbo yekuzvarwa yevakuru vakuru. Vanopfuura makumi masere varidzi vehondo veByzantium vaive maArmenian. Uye mumwe musha mudiki akapa USSR vatungamiriri vaviri uye gumi nemagamba eSoviet Union.
Casino yeArmenia, iyo yakanakisisa yekubhejera zvivako muArmenia
Imwe yenyika idzi yakanaka nenzira yayo, uye mune yega yega pane chimwe chinhu chekuona uye chekuyemura. Uye Armenia haisi iyo yakasarudzika mune izvi. Pane imwe nguva muRepublic iyi, mumwe nemumwe wevashanyi anozowana yavo basa: mumwe munhu achakwanisa kufungisisa zvaanoona, uye mumwe munhu achasarudza mafambiro ekuzorora munzvimbo dzekuvaraidza, semuenzaniso, mukasino.
Pakazara, pane masereinus masere muArmenia. Aya ndiwo makambani ekubhejera Flamingo, Farao, Shangri La, Senator nevamwe. Mune yega yeaya mabhezari ekubheja, vatambi vanopihwa hukuru hukuru hwemitambo yekubhejera uye yemhando yepamusoro sevhisi.
Semuenzaniso, iyo casino << Shangri La Yerevan >> ndiyo imwe yenzvimbo dzazvino dzanyanya dzokubhejera muRepublic. Kupinda kwekasino iyi kuri $ 100 (pasipoti inopihwa chete kune vanhu vanopfuura makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa), asi mari iyi haisi kungoita mutengo wetikiti rekupinda: vanochinjaniswa nemachipisi, ayo anogona kutambwa. Iyo kasino inosanganisira horo dzinoverengeka dzemitambo, yekudyira yakasarudzika << Michelangelo Launch >>, kirabhu yeCW yeVIP vatambi. Iyo kasino inowanzo gadzira marotari akasiyana siyana uye makwikwi ane mari kuhwina, maitiro emakirabhu emakirabhu ayo anopa kodzero yekuwedzera sevhisi (kicheni yemahara, yekupinda mahara, nezvimwewo).
Imba yekasino iri pa10 km yeYerevan-Sevan mugwagwa, iyo inogona kunzi imwe yenzvimbo dzinoyevedza muArmenia. Panharaunda yezvivaraidzo zveShangri La pane yekupaka mota, yakagadzirirwa 100 mota. Naizvozvo, shuwa nezvekuti ungasiya kupi vatambi vekutakura havafanirwe kudaro. Unogona kusvika kasino netekisi.
Kana iwe uchida, iwe unogona kushandisa masevhisi eiyo institution uye kunyorera yekutamba mutambo. Inosanganisira kufamba kwemahara kucasino (kusanganisira ndege kubva kune dzimwe nyika dzine vhiza), yemahara kamuri yehotera, sevhisi yeVIP, 10% kurasikirwa kwezuva nezuva uye zvimwe zvakawanda.
Mamwe makasinasi muArmenia
Rwendo rwekutamba muArmenian kasino runopihwawo nekambani yekubhejera "Sun Palace" , iri muYerevan. Mune ino kasino unogona kunakidzwa nekubhejera kwakadai roulette, Nhema nhema, mapfupa, baccarat, Caribbean neRussia poker, vhidhiyo poker, kune anopfuura zana emuchina wekubhejera, nezvimwe. Kune vateveri vemutambo pamitengo mikuru, imba yeVIP inoshanda. .
Zvese zvinokunda mune ino kasino zvinobhadharwa nehutongi hwehutongi mumari inosarudzwa nemutambi (euro, maRubles) .Muperekedzi wekuchengetedza anogona kupihwa.
Mukuwedzera kubhejera, rwendo urwu runosanganisira kutarisa kwesekupoteredza kwakatarisana neYerevan uye kuenda kuLake Sevan.
Asi kasino "Senator" iri pamuganhu weArgavand uye ne. Tayrov. Mune ino kasino yeArmenia, pamwe nesarudzo yevatengi, sarudzo hombe yevaraidzo inopihwa mune dzinoverengeka dzimba dzemitambo, nzvimbo dzekuzorora, bhawa. Uye munguva pfupi yapfuura, mune ino yakaoma varaidzo yakatanga kushanda resitorendi nyowani, umo iwe unogona kuravira chikafu cheArmenian, Iranian neRussia chikafu.
Zvese zvinhu zvingave zvakanaka, asi mune inotevera 2013 kasino Armenia yakafunga kuendesa kunzvimbo dzakasarudzika dzekubhejera dzakatemwa nemutemo. Uye kubva pakutanga kwegore idzva, kubhejera kunogoneka chete mumiganhu yekutonga yenharaunda dzeJermuk, Tsakhkadzor neSevan.
Zvinosungirwa mamiriro enzvimbo yekasino zvichave kure kubva kuzvipatara, vamiriri vehurumende, masangano edzidzo uye zvetsika nezvenhoroondo zviyeuchidzo zvemadhivhuru mazana mashanu emamita uye nezvimwe, pamwe nehukuru hwakabvumiranwa hwenzvimbo yekubhejera zvivakwa: zve kasino, inofanira kunge ichibva pamamirimita mazana maviri nemakumi mashanu, uye yemitambo ine kuhwina - isingasvike pasi pe500 mita metres Iye akatanga wekuchinja kwenzvimbo dzekasino ndiye Ministry of Finance yeArmenia.
0.1 Rudzi rwe Top 10 Armenian Online Casino Sites
2.1 Kubhejera muArmenia
3 Armenia Online Casinos uye Kubhejera
3.0.1 Mitemo yeArmenia pakubhejera - nhoroondo kumashure
3.1 Ungatanga sei kutamba casino online muArmenia?
3.1.1 Nzvimbo yeArmenia uye nhepfenyuro shomanana yemamiriro ezvinhu
3.1.2 Armenia pamepu yeAsia
3.1.3 Zvitsva zve Yerevan
3.1.4 Chokwadi chinofadza pamusoro peArmenia neArmenia
4 Casino yeArmenia, iyo yakanakisisa yekubhejera zvivako muArmenia
4.0.1 Mamwe makasinasi muArmenia
kushinha mutambo kufamba